Dislocker, ngwa oru iji nweta nkebi ezoro ezo nke Bitlocker si Linux | Site na Linux
Dislocker, a ngwá ọrụ iji nweta nkewa ezoro ezo site Bitlocker si Linux
Ihe nchoputa nke Microsoft nke Windows Bitlocker bu ezigbo uzu nke, mgbe ejiri ya rụọ nkebi nwere ike ichedo ozi dị na ya. Mana otu nnukwu nsogbu o nwere bụ na ọ na-enye ohere ịnweta ozi sitere na Windows, na-ahapụ ịhapụ iji nkebi nke sistemụ na-abụghị Windows.
Ọ bụ ya mere iji decrypt na ugwu BitLocker mpịakọta si Linux anyị ga-eji ngwá ọrụ a na-akpọ "Dislocker" nke ga - enyere anyị aka ịgụ akụkụ nke BitLocker ezoro ezo na Linux na macOS. Dislocker agụwo / dee nkwado maka akụkụ BitLocker ezoro ezo na Windows 10, 8.1, 8, 7 na Vista (AES-CBC, AES-XTS, 128 ma ọ bụ 256 ibe n'ibe, ma ọ bụ na-enweghị Elephant diffuser). Ọ na-akwado BitLocker-To-Go ezoro ezo partitions (USB / FAT32 partitions).
1 Dislocker nwụnye na Linux
1.1 Hazi Dislocker
Dislocker nwụnye na Linux
Ya mere a naghị etinye ngwa ọrụ na nkesa ọ bụla site na Linux, ma ọ bụrụ na ọ dị n'ime nchekwa ego nke ọtụtụ nkesa Linux. Yabụ ọ bụrụ na nrụnye dị mfe.
Na nkesa dị ka - Debian, Ubuntu ma ọ bụ nkesa ọ bụla ọzọ dabere na ndị a, echichi dEnwere ike ịrụ ọrụ ahụ site na njedebe site na ịpị iwu na-esonụ na ya:
N'ihe banyere ndị bụ Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ma ọ bụ ndị ọrụ ọ bụla ọzọ nkesa dabere na Arch Linux, echichi sitere na ebe nchekwa AUR. Yabụ, ha ga-enwerịrị nchekwa e mere na pacman.conf faịlị ha ma wụnye ọkachamara AUR.
Emere nwụnye ahụ na iwu:
Ugbu a maka ndị bụ ndị ọrụ Fedora, RHEL, CentOS ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ sitere na ndị a, na ọnụ ha ga-pịnye iwu na-esonụ:
Ugbu a arụnyere Dislocker, anyị kwesịrị ịhazi ya. Iji malite, anyị ga-ike a ọhụrụ arịọnụ nchekwa ebe enwere ike ị nweta nkebi Bitlocker mgbe arụ ọrụ decryption zuru ezu.
Mgbe imepụta folda "ọdịnaya" na ndekọ ndekọ mgbasa ozi, a ga-emerịrị folda ọzọ.
Ozugbo folda abụọ ahụ dị na ndekọ ndekọ mgbasa ozi, ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na folda ahụ bụ ebe ha kwesiri ịbụ site na ịga na ndekọ na CD ma ọ bụ site na njikwa faili gị.
Ugbu a ọ bụ oge iji Dislocker ka decrypt na ugwu Bitlocker nkebi site na Linux.
Iji mee nke a, ihe mbụ anyị ga-eme bụ na-agba lsblk iwu ka ịchọta windo nkewa Windows nke ezoro ezo na Bitlocker.
Na nke m ọ ga - abụ / dev / sdb1, mana ọ bụla ọ nwere ike ịdị iche, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịchọpụta nkewa.
Amaralarị, ugbu a, anyị ga-eji dislocker, decrypt nkebi. Maka nke a, anyị ga-pịnye iwu na-esote na-etinye akara nkewa ma tinyekwa ụzọ nke folda ahụ anyị mepụtara na aha "bitlocker" na mbụ.
Ebe a A ga-ajụ anyị maka okwuntughe iji nweta onye ọrụ Windows. Anyị pịnyere ya wee pịa tinye.
Iji dislocker iwu, ugbu a ọ bụ oge iji gbagoo akụkụ Bitlocker na folda / media / ọdịnaya.
Ọ dị mkpa iburu n'uche nke ahụ Dislocker ga-akpaghị aka efego gị nkebi na "agụ-naanị" mode na iji dozie nsogbu ahụ, na-agba ọsọ chkdsk na nkeji.
Site na nke a, anyị nwere ike ịnweta ọdịnaya nke nkebi ezoro ezo na Bitlocker si Linux ma nwee ike ịrụ ọrụ na faịlụ ndị dị na ya.
Finalmente iji wepu akụkụ nke Bitlocker na Linux, na-agba ọsọ ahụ umount banyere folda ahụ. Ọ dị mkpa ikwu na a ga-emechi akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ faịlụ m ji mara nkebi a.
Ikpughepu nkebi dị pịnye:
Ọ bụrụ na ewepụla nkebi ahụ, anyị nwere ike ịmanye dismo site na iji kọmputa ede iwu na-esonụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Dislocker, a ngwá ọrụ iji nweta nkewa ezoro ezo site Bitlocker si Linux
Achọrọ m ịgwa gị na m ruru nhọrọ nke na-arịọ onye ọrụ paswọọdụ, mana enwere m njehie
njehie, enweghị ike ịchọta ezigbo vmk datum. ite ime.
ọ dịghị nke nyere decryption pụtara na-decrypting igodo. ite ime.
ị nwere ike inyere m aka, daalụ
Daalụ nke ukwuu maka ntuziaka ahụ, ọ baara m ezigbo uru !!
M nwere a pendrive na Bitlocker na m nwee ike hazi ya na Linux-eso gị nzọụkwụ ma m nwere ike ghara itinye ya gbanwee ya. Ọ mounts ya m "na-agụ naanị" na m na-enweghị ike gbanwee ya. Nwere ike ị nyere m aka? Daalụ !!
Ọ na-adịrị m mma na Linux Mint na Ubuntu, mana mgbe m chọrọ iji ya na Debian, nke bụ distro m chọrọ iji, ọ naghị amata paswọọdụ. Chọrọ ụfọdụ ndị ọzọ dabere.